မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): Android Phone Root လုပ်ချင်သူများအတွက် ဖုန်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်း အမျိူးမျိူး
Android Phone Root လုပ်ချင်သူများအတွက် ဖုန်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်း အမျိူးမျိူး
ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ -www.mediafire.com/Root လုပ်နည်းစာအုပ်
Author Anonymous at 11:02:00 PM
ဆရာမောင်ကျွန်နော်ကိုs3နဲ့sony xpria v rootလုပ်ခြင်လို့
Huawei ph; ကို မြန်မာဖောင့်သွင်းလို့မရဘူး..သွင်းထားတာ..ကိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်.အဲ့ဆိုင်ကတော့ပြောပါတယ်...သက်သက်သွင်းရမယ်တဲ့...5000 လောက်ကျမယ်တဲ့...ရပါတယ်..ဒါပေမယ့်..သွင်းတဲ့..နည်းလေးများမရှိဘူးလားဟင်..ရှိရင်..သိချင်လို့ပါ...ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်.. cutelady185@gmail.com ကိုမေးပို့ပြီး...ပြောပေးပါရှင့်...အမြဲအားပေးလျှက်ပါ..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်. ...
sittway kyawsoemoe said...
Samsung galaxy s2 hd 4g lte ကျွန်တော် root လုပ်တာမှာသွားလို့power ပြန်မတက်တော့ဘူး ကူညီပါအကို ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲ
Htetnay Chi said...
thank very much! but my connection is failed as snail.
I'm Mon said...
yelinn. bangkok said...
Nyinyi naing said...
htet myatthu said...